nyunt nyunt win says:
Thant Nyein Chan Nyi says:
Sithu phyo says:
myattun naing says:
Aung Zaw Htaik says:
chit thet says:
ဆီကိုဘယ်လို ထည့်ရမလဲအမ။ နောက်ပီး ဂျင်း ကြက်သွန်ဖြူမထည့်ရရင် ညှီနေမလားမသိဘူးနော်။
အဲဒီ ဂျင်းနဲ့ ကြက်သွန်ဖြူ ထည့်ဖို့လိုသလားအစ်မ။
ဆီက ကြော်တဲ့အခါ ကြက်သားမြုပ်အောင်အထိ ထည့်ရမှာပါ။ ဂျင်း၊ ကြက်သွန်ဖြူက အနံ့သင်းအောင် ထည့်ရတာပါ.. 🙂
ကျွန်တော်အခု အပေါ်က comment တွေကို ဖတ်ရုံနဲ့တင်ပဲ မေးစရာတောင် မရှိတော့ဘူး.. :D… အမ၀တ်ရည်ကလည်း မေးသမျှကို အကုန်ပြန်ဖြေရှာတယ်.. သူ့ဟာနဲ့သူတော့ ဟုတ်နေတာပဲ.. ၀တ်ရည်ကြောင့် အိမ်က မိသားစု ဟင်းလျှာတွေအတွက် တော်တော်ကို အဆင်ပြေနေကြတာပဲ.. ကောင်းပါလေ့ဗျာ.. အခုကို မြန်မာတွေအတွက် သီးသန့်လေး ဟင်းလျှာချက်နည်းတွေကို အချိန်ပေးပြီး တင်ပေးတာ ၀တ်ရည်ကို အရမ်းကျေးဇူးတင်မိပါတယ်ဗျာ..
You r so welcome, bro.. Thank you too 😛
ကြော်ကြည့်ဦးမယ်… ကြက်ကြော်ဆို အရမ်းကြိုက်တာ…ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ညီမလေး…
Potasium ဆားလို့ ပဲပြောတော့ အဲဒါက ဘယ်လိုလဲဘာလဲ ရိုးရိုးဆားနဲ့ ဘာ ကွာလဲ ဘယ်မှာဝယ်လို့ ရနိုင် မလဲ ပြော ဦးလေ။
Potassium ဆားက ရိုးရိုး ဆား အစားထိုး အသုံးပြုတာ များပါတယ်။ Potassium ဆားက ကျန်းမာရေးအတွက် အထောက်အကူလည်း ပြုပါတယ်။ potassium ဆားကို City Mart မှာ မေးဝယ်လို့ရပါတယ်။ ရှာမရရင်လည်း ရိုးရိုးဆားကို အစားထိုး အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
သားသားနဲ့သမီးလေးကိုကြော်ကျွေးရမယ်.. အိမ်မှာဆိုတော့ဆီမသန့်မှာလည်းမပူရတော့ဘူးပေါ့နော်…. .thank you… ပါ ညီမလေး ….
ဟုတ်ကဲ့။ လုပ်စားကြည့်ပါ sis…
ညီမလေးရေ.. ဒီနည်းလေးအတိုင်းကြော်ကျွေးလိုက်တာ ကလေးတွေရော လူကြီးတွေပါ အရမ်းကြိုက်ကြလို့ ညီမလေးရေ ကျေးဇူးအထူးတင်တယ်နော် ညီမလေးရဲ့နည်းလေးတွေနဲ့ ကလေးတွေကျန်းမာအောင် ဂရုတစိုက်ချက်ကျွေးဖြစ်တယ်
Very glad sis you all like it 😀
အမ ရဲ့  Site ကို လာလည် တာ သဘောကျတာတွေ အများကြီးတွေ့တယ် ။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် ။
နွားနို့ထည့်ရတယ်ဆိုလို့…..နွားနို့က ကျိုပြီးသားထည့်ရမှာလား၊ အစိမ်းပဲထည့်ရမှာလား…
အဲဒါလေး ပြန်ပြီး ပြောပြပေးပါဦး
နွားနို့ အစိမ်းထည့်တာပါ bro..
Thanks. Nyi ma lay
အမရယ် Chicken ကိုအရင်ပြူတ်ဖိုလိုသေးလား…. Waiting for your answer…
ပြုတ်ဖို့ မလိုပါဘူး။ ကြက်သားအရသာနုယ်နုပ်ပြီ ဂျုံကပ်ပြီမှ ကြော်ရမှာပါ..
ကျေးဇူးအထူးတင်တယ် အမ… ညီမနေတဲ့နေရာမှာ KFC မရဘူးလေ.. Homemade KFC လုပ်လို့ရပြီ…
mg nyo says: